April 2022 - MM Daily Life
ချစ်သူလေးနဲ့တရားဝင်ထိမ်းမြားလက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကိုအသိပေးလာတဲ့ မင်းသမီးချောမေသက်ခိုင်
April 30, 2022 by MM Daily Life
ပရိသတ်ကြီးရေ မေသက်ခိုင်ကတော့တစ်ခတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုမင်းသမီးတစ်လက်ပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာဖူးဖူးလေးကို ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေသာမကမိန်းကလေးပရိသတ်တွေပါသဘောကျအားပေးဝန်းရံခံခဲ့ရသူပါ။ လက်ရှိမှာတော့အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပေမယ့် သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလျက်ရှိတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာနေထိုင်ကာ ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနေတဲ့မေသက်ခိုင်ကတော့ပရိသတ်တွေအံအားသင့်စရာကိစ္စတစ်ခုကိုချပြခဲ့တာပါ။ အကြောင်းကတော့သူမအနေနဲ့ လက်ထပ်ပြီးကြောင်းကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတင်လာခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ပျော်ရွှင်စရာသတင်းကောင်းကို မိတ်ဆွေနဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း ဂုဏ်ပြုစကားတွေမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ ပရိသတ်တွေလည်း မေသက်ခိုင်ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းအတွက် ဂူဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါဦးနော်။ Credit -CeleGabar Soure -MayThetKhine unicode ပရိသတ္ႀကီးေရ ေမသက္ခိုင္ကေတာ့တစ္ခတ္တစ္ခါက ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယိုမင္းသမီးတစ္လက္ပါ။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့မ်က္ႏွာဖူးဖူးေလးကို ေယာက်ာ္းေလးပရိသတ္ေတြသာမကမိန္းကေလးပရိသတ္ေတြပါသေဘာက်အားေပးဝန္းရံခံခဲ့ရသူပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့အႏုပညာအလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပမယ့္ သူမရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာေဖာ္ျပလ်က္ရွိတာပါ။လက္ရွိမွာေတာ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာေနထိုင္ကာ ဘဝကိုေအးခ်မ္းစြာျဖတ္သန္းေနတဲ့ေမသက္ခိုင္ကေတာ့ပရိသတ္ေတြအံအားသင့္စရာကိစၥတစ္ခုကိုခ်ျပခဲ့တာပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့သူမအေနနဲ႔ လက္ထပ္ၿပီးေၾကာင္းကို သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာတင္လာခဲ့တာပါ။ သူမရဲ႕ေပ်ာ္႐ႊင္စရာသတင္းေကာင္းကို မိတ္ေဆြနဲ႔ပရိသတ္ေတြကလည္း ဂုဏ္ျပဳစကားေတြမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကတာပါ။ ပရိသတ္ေတြလည္း ေမသက္ခိုင္ရဲ႕မဂၤလာသတင္းအတြက္ ဂူဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားခဲ့ပါဦးေနာ္။ Credit -CeleGabar Soure -MayThetKhine
၂၄နာရီအတွင်း မိုးတွေရှယ်ဝုန်းပြီး မိုးကြီးနိုင်တဲ့ ဒေသများ
မင်းကွန်း ခိုတောင် စစ်ကိုင်း မန္တလေး လေမိုး လျှပ်စီးမိုးကြိုး Lightning: Cloud to ground, Power: 46kA (Angry rourer), Date: 30/04/2022, Time: 01:19:06pm မတ္တရာ လေမိုး လျှပ်စီးမိုးကြိုး ⛈⛈⛈⛈ Lightning: Cloud to ground, Power: 34kA (Strong slammer), Date: 30/04/2022, Time: 12:33:48pm လှတော ဝက်လက် ဟံလင်း ကျောက်မြောင်း စဉ့်ကူး လေမိုးလျှပ်စီးမိုးကြိုး မိုးသီး၊ မိုင်းဖြတ် တာလေ တာချီလိတ် လေမိုးလျှပ်စီးမိုးကြိုးမိုး အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေသည် ၂၀၂၂ မေလ ၂၆ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၃ရက်နေ့အတွင်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို လွှမ်းခြုံသွားနိုင်ပါတယ် တောင်သူလယ်သမားများ စိုက်ပျိုးရေးသမားများ … Read more
မိန်းမကို စိတ်မဆင်းရဲစေတဲ့ ယောကျ်ားဆိုတာ
မိန်းမကို စိတ်မဆင်းရဲစေတဲ့ ယောကျ်ားဆိုတာ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ရှိရှိသမျှအိမ်အလုပ် အိမ်ကမိန်းမအလုပ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယောကျ်ားများ အဓိကထားပြီး ဖတ်စေချင်ပါတယ်… လူတွေက ဘယ်လိုပဲ သတ်မှတ် သတ်မှတ်၊ ယောက်ျားတစ်ယောက် အိမ်အလုပ် လုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ မိန်းမကို ကူတယ်လို့ ယောကျ်ားအတော်များများက သတ်မှတ်ကြတာ (၁) ပြန်တွေးကြည့် တစ်အိမ်လုံး အလုပ်တွေ သူတစ်ယောက်ထဲ အကုန် လုပ်ရမယ်ဆို မျှတပါ့မလား (၂) ငါ့မိန်းမကို အိမ်ရှင်းကူတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအိမ်မှာ ငါလဲနေလို့ ငါလဲအိမ်ရှင်းသင့်လို့ ရှင်းတာ (၃) ငါ့မိန်းမကို ထမင်းဟင်းချက် ကူတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါလဲစားချင်လို့ ချက်တာ (၄) ငါ့မိန်းမကို ပန်းကန်ဆေး ကူတာ မဟုတ်ဘူး။ ငါလဲ ဒီပန်းကန်တွေ သုံးထားလို့ ဆေးတာ (၅) ငါ့မိန်းမကို … Read more
Categories ဘ၀ႏွင့္အခ်စ္ Leaveacomment
ဒီအချက် (၅)ချက်ကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့မိန်းမဆိုရင် ယောကျာ်းတွေတန်ဖိုးထားပြီးရင်းထားနေမှာအသေအချာပဲ….
ဒီအချက် (၅)ချက်ကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့မိန်းမဆိုရင် ယောကျာ်းတွေတန်ဖိုးထားပြီးရင်းထားနေမှာအသေအချာပဲ…. ၁။မြွေဟောက်လို မနေပါနဲ့။ မြွေဆိုတာမျိုးက…အရှုပ်ကြိုက်တယ်။ရှင်းလင်းသန့်ပြန့်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဘယ်တော့မှမနေထိုင်တတ်ကြသလိုလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရင်လည်းသူ့လည်း ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အမောက်ထောင်ပြီးအပြစ်တွေ ရှာကာကိုက်မယ်ဆိုတာချည်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်…ဇနီးသည်တစ်ယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတာဝန်တစ်ရပ်က ဘာလဲဆိုရင်အတူနေထိုင်ကြရာ အိမ်ဂေဟာတစ်ခုရဲ့အတွင်းအပြင်ကို နေချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင်သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိဖို့ပါပဲ။နောက်တစ်ခါ…မြွေဟောက်တစ်ကောင် ပမာခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူကိုဟော့ဟော့ ဒိုင်းဒိုင်းအပြစ်မရှာ နေထိုင်သွားတတ်ဖို့ပါ။ ၂။တစ်နေ့တစ်ခါ ခေါင်းလျှော်ပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာဦးခေါင်းဟာအမြင့်မြတ်ဆုံး ဖြစ်နေသလိုအိမ်တစ်အိမ်မှာလည်းဘုရားကျောင်းဆောင်ဟာအိမ်တစ်အိမ်ရဲ့တကယ့် အမြင့်မြတ်ဆုံးပါပဲ။အဲဒီတော့ဇနီးသည်တစ်ယောက်ရဲ့ဒုတိယဆောင်ရွက်ရမယ့် အချက်က အိမ်ကျတော့နေချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားပေမဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်ကျတော့ရေချမ်းလည်း ကပ်မပေးဆွမ်းလည်း ကပ်မပေးပန်းလေးတောင် ကပ်မပေးပဲရှင်းလင်းထားမှု ရှိမနေရင်ဖုံတွေလည်း အလိမ်းလိမ်း ကပ်ပင့်ကူတွေလည်းအထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဘုရားကျောင်းဆောင်ဟာ ချောက်ကပ်ပြီးနေရင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှာခေါင်းရှုံ့ခံရမှုကို ခံရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တစ်နေ့တစ်ခါ ခေါင်းလျှော်ပါဆိုတာကဘာသာရေးတရားမှာလည်းပြစ်ချက်မရှိအောင်ကိုင်းရှိုင်းတတ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ၃။မျှမျှ တတ လွှဆွဲပါ။ သစ် တုံး တစ် တုံးကိုလွှဆွဲနေကြတဲ့ လူနှစ်ယောက်ဟာအသွားအပြန် နှင့် အပေးအယူမတည့်ရင် မမျှတရင်အဆွဲခံရတဲ့သစ်တုံးဟာပြီးပြတ်ဖို့ မလွယ်ကူလှသလိုဆွဲနေတဲ့လူဟာလည်းတဖြည်းဖြည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံနေရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုပဲဇနီးသည်တစ်ယောက်အနေနဲ့တတိယဆောင်ရွက်ရမယ့် အချက်ကမျှတမှု ရှိပြီးဘက်မလိုက်ဖို့ပါ။ကိုယ့်မိဘကို ရိုသေသလိုမျိုးခင်ပွန်းသည်ဘက်က မိဘတွေကိုလည်းအရိုအသေပေးနိုင်ရပါမယ် အိမ်မှာ … Read more
“အလျှင်အမြန် အကျိုးထူးတဲ့ နှင်းဆီ (၁၀)ခတ် စီးပွားတက်အဓိဌာန်”
“အလျှင်အမြန် အကျိုးထူးတဲ့ နှင်းဆီ (၁၀)ခတ် စီးပွားတက်အဓိဌာန်” ထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးပြီး ကံပွင့် လာဘ်ပွင့်ကာ ဝင်ငွေတိုးချင်တဲ့ ခုနှစ်ရက်သားသမီး မိတ်ဆွေများအတွက် အလျင်မြန်အကျိုးထူးကို ရရှိစေမည့် နှင်းဆီ ဆယ်ခက် စီးပွားတက် အဓိဋ္ဌာန်ဝင်နည်း ။ နှင်းဆီပန်း (၁၀) ပွင့် (ဘာအရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်)ကို ဆူးမပါအောင် သေချာ သန့်စင်ပြီး အိမ်ရှိ ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှေ့မှာ စာ:ပွဲအမြင့်ပေါ်တင်ပြီး ကပ်လှူပါ။ ပြီးလျှင် ဘုရားဂုဏ်တော် ကိုးပါးဂါထာကို ဂုဏ်တော်တစ်ပါးလျင် ပုတီး ( ၁ ) ပတ်စိပ်ရပါမည်။ဂုဏ်တော်တစ်ပါးစီ၏ အရှေ့မှ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ကိုထည့်၍ ရွတ်ဆိုရပါမည် ။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊ သော ဘဂဝါ … Read more
Categories ေဗဒင္ ယၾတာ Leaveacomment
စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် ပြင်ဦးလွင်က ဒီမေမေကိုကြည့်ပါ
စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် ပြင်ဦးလွင်က ဒီမေမေကိုကြည့်ပါ။ ကိုယ်ဝန်သုံးလမှာ အမျိုးသားက ကလေးမလိုချင်လို့ ထားသွားတယ်။အဲတော့ ကိုယ်ဝန်နေ့စေ့လစေ့ကြီးနဲ့ ပန်းရံဝင်လုပ်တယ်။ မွေးခါနီးစရိတ်ခက်ခဲနေလို့ ကျွန်တော်တို့နဲ့အဆက်သွယ်ရပြီး အခမဲ့မွေးဖို့စီစဉ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မွေးပြီးတော့လည်း အလေးအပင် မမနိုင်လို့အခု သမီးလေးကို ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ပြီး အဝတ်လိုက်လျော်ပါတယ်။ အခုလည်း တစ်လ ၈သောင်းနဲ့ ပြင်ဦးလွင်က ဆိုင်တစ်ခုမှာ အဝတ်လိုက်လျော်နေပါတယ်။အိမ်ငှားခတင် တစ်လ လေးသောင်းပါ။ ဘဝကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်တယောက်ထဲ ရပ်တည်နေတဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ မေမေပါ။ ပြင်ဦးလွင်က အမျိုးတို့ အလုပ်လေးဘာလေး သက်သာတာလေးရှိရင် ကူညီပေးပါအုန်း။ သူက အကူညီ မတောင်းပေမယ့် ကလေးတွဲလောင်းလေး ဆိုင်ကယ်စီးပြီး အဝတ်လိုက် လျော်နေတာ အဆင်မပြေလောက်လို့ပါ။ ကူညီချင်သူများရှိရင်လည်း သူ့ဖုန်းနံပတ်က 09260117699 ပါ။ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဒီမေမေရဲ့သမီးလေးက လေးလပြည့်တော့ပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်သလောက်ဆေးခန်း ရဲ့(၈၇) ယောက်မြောက်သမီးလေးပါ။အရမ်းလိမ်မာပါတယ်။ အလှူရှင်တွေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် … Read more
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် (၇၀) ကျော်က ကြိုတင်ဟောခဲ့တဲ့ တဘောင်နဲ့ ထူးထူးခြားခြား ကွက်တိကျလာတဲ့ အတိတ်နိမိတ်များ…
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် (၇၀) ကျော်က ကြိုတင်ဟောခဲ့တဲ့ တဘောင်နဲ့ ထူးထူးခြားခြား ကွက်တိကျလာတဲ့ အတိတ်နိမိတ်များ… လူတွေက နိမိတ်တွေ ဗေဒင်တွေ ယုံတယ်ဆိုတော့ သူတို့ အခြေအနေကောင်းလား မကောင်းလား သူတို့ ဘာသာ ဗေဒင် ဘာညာတွက်ဆရအောင် အာဏာသိမ်း ၂၀၂၁ ကနေ ၂၀၂၂ အထိ နိုင်ငံတော် နိမိတ်ဆိုတာတွေ နဲ့ တဘောင်ဆိုတာတွေကို မှတ်မိသလောက်စုစည်းထားတယ်။ အဲ့နိမိတ်တွေမရေးခင် စစ်တပ်ရဲ့ ဇာတာသမိုင်းအစကို ပြောရရင် ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးယူခါနီး နိုင်ငံတော် ဇာတာကောင်းအောင် ဦးနုက ဗိုလ်လင်္ကျာကို ပဲခူးက နက္ခကြည့်ဆရာကြီး ဦးသက်တင်ဆီကို လွှတိပြီ အခါကောင်းယူခိုင်းတယ်ပေါ့လေ။ ဖြစ်ချင်တော့ ဗိုလ်လင်္ကျာက စပ်ဆော့ပြီး တပ်မတော်အင်အားကြီးမှ တိုင်းပြည် အင်အားရှိမယ်ဆိုပြီး စစ် တပ်ကံကောင်းစေမဲ့ ဇာတာခွင်မှာ လွတ်လပ်ရေးယူဖို့ ဆရာကြီးကိုပြောသတဲ့ … Read more
ကျက်သရေ အဖြာဖြာ နဲ့ပြည့်စုံ ပြီး ၊ စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးပွားစေဖို့
ကျက်သရေ အဖြာဖြာ နဲ့ပြည့်စုံ ပြီး ၊ စီးပွားလာဘ်လာဘ တိုးပွားစေဖို့ အလုပ်အကိုင်တွေ အဆင်မပြေဘဲ ထစ်ငေါ့ လွဲချော်မှုတွေ များနေတာ၊ ဝင်ငွေထက် ထွက်ငွေက ပိုများနေပြီး ကြွေးပူ ပတ်နေတာ၊ အိမ်တွင်းမှာလည်း မိသားစုဝင်တွေ အချင်းချင်း အမြင် မကြည်လင် ဖြစ်နေတာ အစရှိတဲ့ လူမှု စီးပွားအခြေအနေ အရပ်ရပ်မှာ အားနည်းချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ ဘယ်ဗေဒင်ဆရာဆီကိုမှ မသွားသေးခင် ဒီအချက်တွေကို အရင်ဆုံး တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေး ပြင်ဆင်ကြည့်ပါ။ . . . . . . . ပြီးမှ ဗေဒင်ဆရာနဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ . . . . . . . အောက်မှာ ဖော်ပြတဲ့ … Read more
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၂၉)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် တိမ်အသင့်အတင့်မှ တိမ်ထူထပ်နေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေရာအနှံ့အပြား၊ နေပြည်တော်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကျားမိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀) ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။လှိုင်းအနည်းငယ်မှလှိုင်းအသင့်အတင့်ရှိမည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာမြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် (၄)ပေမှ (၇)ပေခန့် ရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်(၂)ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်။ နေပြည်တော်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျားမှ နေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည်။ နေပြည်တော်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျားမိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည်။ရွာရန်ရာနှုန်း(၆၀)ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျားမိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ရွာရန်ရာနှုန်း(၈၀)ဖြစ်ပါသည်။ မန္တလေးမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။ နေရာကွက်ကျားမိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်ပါသည်။ရွာရန်ရာနှုန်း(၆၀)ဖြစ်ပါသည်။ … Read more
မင်းတုန်းမင်းနန်းတက်စဥ်က နန်းတော်ထဲမှ ရွှေနန်းပျော်သမီးတော်များ ၏ တစ်နေ့တာ အကြောင်း
April 29, 2022 by MM Daily Life
မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးသည် နန်းတွင်းမှာလည်း နန်းတွင်းအလိုက်၊ နန်းပြင် တွင်လည်းနန်းပြင်အလိုက် အထောက်တော် များထားသည်ဟု သိရ၏။နန်းတွင်း အထောက်တော်များတွင် မြတောင် စုဖုရား (စုဖုရားလတ်) ငယ်စဉ်က အထောက် တော်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရသည်ဟု သိရပါသည်။ ထိုကြောင့်သမီးတော်ကလေး များထဲ၌လည်း ထက်မြက်သူများကို မင်းတရားကြီးက အထောက်တော် အဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ခိုင်းသည်ဟု တွေ့ရ ပါသည်။မိဖုရားကြီးများ၏ အဆောင် များတွင် ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ် အာမီနီယမ် လူပျိုအပျိုတော်များ ၀င်ရောက်ခစား ကြသည်။ ထိုအနောက်တိုင်း အပျိုတော် များသည် တက်တင်းဇာ တစ်ချောင်းထိုး နည်း၊ သိုးမွေး နှစ်ချောင်းထိုးနည်းများကို လုပ်ဆောင်ပြ၍ ဆက်သကြသည်။ ဤတွင်စင်္ကြာဒေဝီ မိဖုရားခေါင်ကြီး သည် ရွှေနန်းပျော်သမီးတော်များကို အနောက် တိုင်းမှ တက်တင်းဇာထိုးနည်း၊ သိုးမွေး နှစ်ချောင်းထိုးနည်းများကို သင်ယူစေသည်။ ဤကိစ္စ၌ … Read more